3 Eoropa Cities tsara indrindra By Train Visited | Save A Train
Home > Travel Europe > 3 Eoropa Cities tsara indrindra By Train Visited
Misy maro tanàna tsara tarehy any Eoropa, ary inona no more, fa dia mora ny hitsidika azy rehetra. Traveling ny rail no fomba lehibe ny nahita ireo siny-list toerana. Eto dia 3 Eoropa tanàna tsara indrindra nitsidika ny fiaran-dalamby.
Isika manomboka ny tanàna eoropeanina nitsidika lamasinina tsara indrindra amin'ny lovan'i: efa nampiasaina, Belzika
Misy any Belzika kokoa noho ny marina sôkôla. Bruges dia malaza amin'ny maha-tanàna lakandrano, toy ny Venice ary Amsterdam. Raha ny tena izy, ny tanàna iray manontolo dia UNESCO World Heritage toerana. Mitsidika Bruges lamasinina dia hevitra lehibe satria Bruges tena gara fotsiny 10 minitra mandeha avy ny lehibe rehetra tsena eny an-dalambe ary 20 minitra ho an'ny tsena kianja. Izany dia manome ihany koa ny fiaran-dalamby rehetra tanàna lehibe hafa ao amin'ny Belzika, ary koa ny kely, Frantsa, ary ny Lamasinina Thalys Paris-Brussels-Ostend.
Noho izany boky ny fiaran-dalamby tapakila ary mankafy ny toerana tsara tarehy ny efa nampiasaina. Aza adino ny hankafy Mayo fries ary ny eo an-toerana labiera.
Fa ny masoandro: Sevilla, Espaina
Inona no tsapanao momba ny tara-masoandro sy ny tanàna eoropeanina tsara indrindra nitsidika ny fiaran-dalamby? Ahoana ny tsara tarehy Andalucian endriky ary Moorish maritrano? Toa tsara izany? Ary Seville ho anareo.
Mpitety ankamaroan'ny fandinihana fiaran-dalamby nankany Espaina mieritreritra Barcelona na Madrid, fa ny tena bebe kokoa firavaka lainga atsimo, ao Espaina fahefatra lehibe indrindra tanàna.
Seville ny Santa Justa gara dia ampahany amin'ny iray haingam-pandeha, -tsipika dimy commuter fanompoana sy mampifandray ny 17 Zavatra lehibe tanàna, ka tsy misy fomba tsara kokoa noho ny mandeha lamasinina.
Rehefa mitsidika, ho azo antoka Mamangy ny fofonaina-mandray katedraly sy ny handeha hanao fitsidihana Tapas – ianao dia afaka book with an organized group.
Eoropa tanàna tsara indrindra nitsidika lamasinina Fa ny hizaha: Munich, Alemaina
Munich dia fifangaroana ny vaovao tsara tarehy toy ny BMW fari foiben'ny sy ny Allianz Arena sy ny toerana manan-tantara toy ny Nymphenburg Palace and the Munich Hofgarten and that is why we have put her on our European cities best visited by train.
Rehefa mitsidika Alemaina lamasinina, dia afaka mitsambikina amin'ny any Venice, namakivaky Verona, Trento, ary Innsbruck, ary – monja fito ora taty aoriana – ho amin'ny Munich. Ny fomba fijery manamorona ny lalamby dia mahatalanjona. Tanàna italiana mahafinaritra manamboatra lalana ho an'ny Nanketo Alpes eto ary avy eo ny Dolomites alohan'ny tonga tany Munich.
Rehefa mitsidika, ho azo antoka ny hanandrana ny sasany avy ‘Munchner Weiswurst', saosisy nanompo tamin'ny mofo vao mafana pretzels sy ny mamy tsinapy. Sasao izany any amin'ny iray amin'ireo malaza Bavarian labiera.
Aingam-panahy ve ianao mba hitsidika ny iray amin'ireo tanàna tsara tarehy Eoropa? Eoropa tanàna tsara indrindra nitsidika ny fiarandalamby azo namandrika amin'ny tsara indrindra ao amin'ny fiaran-dalamby vidin'ny tapakila Saveatrain.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/3-european-cities-best-visited-by-train/ - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)